‘नेपालले मिसाइल बोक्न र बनाउन कहिले नपरोस्’ « Sansar News -->
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १४:२६
धर्म उस्तै, संस्कृति उस्तै, भाषा, भेष, रहनसहन, खाना पनि झन्डै झन्डै उस्तै । रोजगारी, बिहेवारी राजादेखि जनतासम्म यता र उता उस्तै उस्तै । भारतले नेपालको पानीले आफ्नो भूमिमात्र सिंचित गरेको छैन, नेपालीको रगत र बलिदानले भारतले कयौं युद्ध जितेको इतिहास साक्षि छ । साथै अहिले पनि हजारौं नेपाली जवानले भारतको सुरक्षा गरेका छन् भन्ने कुरा सत्य हो । यति नजिक र सामिप्य रहेको नेपाललाइ भारत किन युगौदेखि सताउदै आइरहेछ ? शान्त र सहनशील नेपालमाथि किन बारम्बार थिचोमिचो गरिरहन्छ ? के आज पनि भारत इन्दिरा गान्धीले झै नेपाललाइ भारतमा बिलय गराउने चाहना राखिरहेछ ? के आज पनि नेपालको सार्वभौम र स्वतन्त्र अस्तित्वको ख्यालै नगरी गरी आफ्नै छत्रछाया र पक्षमा परिरहोस् भन्ने चाहन्छ ? राजा फाल्ने, राजा बनाउने उहि पुरानै खेल खेलिरहन चाहन्छ भारत ? कहिले यो दललाइ कहिले उ दललाइ हात लिने र घात गर्ने काम गरिरहन चाहन्छ भारत ? नेपालको सरकार हिजोको जस्तै अस्थिर र नौ–नौ महिनामा फाल्ने र राख्ने काम निरन्तर गराउन चाहन्छ भारत ?
कहिले मधेशलाइ उचालेर र कहिले पहाडी नेताहरू उचालेर जनएकता अनि भौगोलिक एकता बन्न किन दिदैन भारत ? एउटै र उस्तै धर्म र संस्कृति भन्दै अनि मान्दै यसरी मार्न र बाध्न बनाउन खोज्नु कुन नैतिकता र आचरणले दिन्छ भारतलाइ ? के उहिलेको बेलायत र हिटलर जस्तै अन्य मुलुक र सत्तालाइ ढाल्दै, मिच्दै साम्राज्य खडा गर्दै आफ्नो औपनिवेश बनाउदै र सीमा विस्तार गर्न चाहन्छ भारत ? के उहिलेको जस्तै चीन र नेपालसँग युद्द गर्न चाहन्छ भारत ? होइन भने एकपटक छिमेकीलाइ सहयोग गर्दै उसको सेना केहि समयको लागि बस्न दिएको जमिनबाट आफ्नो सेना किन हटाउदैन ? किन केहि समयको लागि उपयोग गर्न दिएको जमिन छोड्दैन र उल्टै अन्य सिमानाहरू मिच्दै नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरि रहन्छ भारत ?
एउटै धर्म र संस्कृतिको अर्थ र महत्व के यही हो ? रोटी र बेटीको सम्बन्ध यस्तै हुन्छ ? झन् अर्को डरलाग्दो खुलासा एक भारतीय भूपु सैनिक जनरलले गरेका छन् । उनले नेपालमा माओवादीलाइ सहयोग गरेर र हिन्दुराष्ट्र हटाउन लगाएर भारतले ठूलो भुल गरेको छ भनेर ? यदी यो सत्य हो भने १७ हजार नेपाली मार्न÷मराउन भारत जिम्मेवार छ । एकमात्र हिन्दु राष्ट्र नेपाल हटाउन व्यापक हिन्दु समुदाय भएको भारत धर्म र संस्कार नभनि÷नहेरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि पर्नेरहेछ भन्ने देखिएको छ । के यो सत्य हो ? आफ्नो स्वार्थको लागि भारत–नेपाल र नेपालीमाथि जस्तोसुकै घात गर्न तयार हुँदोरहेछ ? यस्तो बेला नेपाल–भारतबीच भेषभुषा, भाषा, खाना र गानाको एक रूपताको औचित्य र महत्व के नै रह्यो र ? यी सबै भाइचारा र सामिप्यता त देखाउने र भन्ने मात्र रहेछ, व्यवहारमा त मिच्ने, थिच्ने र बिगार्ने सहज माध्यममात्र बनाएको रहेछ भारतले भन्ने प्रष्ट हुँदैन र ?
भारतका आजका शाषक, प्रशासक, दल र आम जनसमुदायले नेपालमाथि हुदै आएका यी थिचोमिचो र विस्तारवादी यी आचरण बदल्न मोदी सरकारलाइ सुझाब र दबाब दिनै पर्दछ । नेपालसँग रहेका सबै खाले समस्या हल गर्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ । भारत छिमेकी देशसँग युद्ध र थिचोमिचो गर्ने गरी होइन आम भारतीय र भारतको बिकास र सम्वृदिको लागि छिमेकीहरूसँग सद्व्यवहार गरेर र असल सम्वन्ध बनाएर अगाडी बढ्नु पर्दछ । छिमेकीको जमिन लिएर आफू सुरक्षित बन्न खोज्ने होइन छिमेकीसँग मिलेर सुरक्षित बन्न खोज्ने हो । यो नै भारतको लागि सुरक्षित रहने उपाय हो । मित्र बनाएर सुरक्षित बन्न सकिन्छ । शत्रु बनाएर कोही सुरक्षित रहन सकिँदैन भनेर भारतले बुझ्न जरुरी छ ।
भारतले पाकिस्तान र बंगलादेश बन्ने आफ्नो जमिन र जनता गुमाएर नेपालको केहि हेक्टर जमिन मिचेर कब्जा गरेर बलियो र बिसाल हुन्छु अनि महान र बलवान भारत बन्छु भन्ने सोच र व्यवहार छाड्नुपर्छ । भाइरसले हरेक खाले मानव र मिसाइल कमजोर बनाइरहेको अवस्थामा भारतले नेपालको जमिन लिएर सुरक्षित बन्छु भन्नु गलत हो । नेपालको जमिन लिए मात्र चीनलाइ रोक्न र चीनसंग लड्न सक्छु भन्नु भारतले आजको युग र अवस्थालाइ नबुझ्नु हो । तथ्य, प्रमाण, इतिहास र संधी साक्षी छन् ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको सिमाना भित्रपर्छ । सधैको लागि भाइचारा र असल सम्वन्ध बनाउन भारत सच्चिनु अनिवार्य छ । मिसाइल र भाइरसको युगमा ‘सानो देश र भूमि’ भनेर मिच्ने थिच्ने कार्य कसैले गर्नु हुँदैन, त्यसले सबैलाई ठूलो क्षति पुर्याउछ भन्ने बुझ्नै पर्छ । भारतले यही बुझेर नेपाल–भारत बिचको सिमाना समस्या समाधान गर्नुपर्दछ । होइन भने, एउटै धर्म, संस्कृति, समुदाय भनेर गर्व गर्ने र आफ्नो ठान्ने परम्परा तोड्नु पर्दछ । भारतले बुझोस् उसका विरुद्ध नेपालले मिसाइल बोक्न र बनाउन कहिले नपरोस् । नेपाल यही चाहन्छ ।